Kilalao malagasy: homena laka etsy amin’ny City Art | NewsMada
Kilalao malagasy: homena laka etsy amin’ny City Art
Fanorona, katro ary tsobato. Kilalao malagasy fanaon’ny ankizy hatramin’izay kanefa tsy dia mahazo vahana intsony, ankehitriny. Antony lehibe mahatonga izany ny tsy fisian’ny toerana hilalaovan’ny ankizy intsony, indrindra ny aty an-tanàn-dehibe. Eo koa ny tsy fampitan’ny ray aman-dreny ireny karazan-dalao ireny, noho ny tsy fahampiam-potoana.
Antony iray hikarakaran’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera ny “Kilalao malagasy”, izay hatao etsy amin’ny City Art, La City Ivandry io, ny tontolo andron’ny asabotsy 7 desambra ho avy izao. Hanasana ny ankizy sy ny tanora tsy ankanavaka, na ireo efa mahay na ireo vao hianatra izany. Natao ho fotoana fialamboly hafa noho ny mahazatra ny mpianatra, isaky ny faran’ny herinandro izy ity mba tsy ho ireo karazan-dalao vahiny ihany no mampiasa ny sain’ny zaza malagasy.
Tsiahivina fa toerana iray natokana hanomezan-danja ny kolontsaina malagasy, izay tantanin’ny minisitera ny City Art. Efa nisesy tao ny fampirantiana isan-tsokajiny, ka izao mirona amin’ny kilalao malagasy izao indray.